Ukukhuthaza ukusetyenziswa kweelwimi ezininzi kwizifundo zaseAfrika ngeZixhobo zeDijithali-AfricArXiv
E papashwe ngu I-AfricArXiv on 19I ngoNovemba 2021 19I ngoNovemba 2021
Ukusukela oko saphehlelelwa ngo-2018, senze ukuba kube yinto ephambili ukwenza abafundi base-Afrika bangenise umsebenzi wabo kwi-AfricArXiv ngeelwimi zesintu, ngaphandle kwesiNgesi, isiFrentshi kunye nesiArabhu. Kukho amalinge aliqela okukhuthaza iilwimi zesiNtu ezikolweni nakwiidyunivesithi ezifana nezifundo ngeelwimi zesiNtu, ukusetyenzwa kolwimi lwendalo, kunye noguqulo-lwimi phakathi kwezinye. Nanku uChido Dzinotyiwei esenza kube lula ukufunda iilwimi zesiNtu ngelinge lakhe iVambo academy. UChido ngumfundi weMasters kwezoRhwebo kwiYunivesithi yaseKapa yesiDanga sesiDanga kwiSikolo soShishino (UCT GSB).
UChido Dzinotyiwei, ingqondo emva kweVambo Academy. Umthombo womfanekiso: https://www.news.uct.ac.za/article/-2021-11-12-new-online-tool-helps-users-learn-an-african-language [ibhlog yokuqala]
I-Afrika lelona lizwekazi likhula ngokukhawuleza nelikwindawo yesibini ngobukhulu emhlabeni. Ngelishwa, kunzima ukufumana imithombo yolwazi lwaseAfrika. KwiVambo Academy sinenjongo yokuvala loo msantsa kwaye senze ukufunda kube mnandi.
Funda ngakumbi malunga neVambo academy e https://www.news.uct.ac.za/article/-2021-11-12-new-online-tool-helps-users-learn-an-african-language
Amalinge afana neVambo academy akhuthaza unxibelelwano ngeelwimi zesiNtu nokufikelela kulwazi olufumaneka ngeelwimi zesiNtu. Oku kubaluleke ngakumbi kubaphandi baseAfrika ababelana ngophando lwabo ngeelwimi zesiNtu, kunye nabaphulaphuli abanxibelelana nophando olubhalwe ngeelwimi zesiNtu. I-AfricArXiv ikwanegalelo kwidemokhrasi yokufikelela kupapasho lwabafundi ngeelwimi zesiNtu ngokwamkela amanqaku ophando kunye noshwankathelo olubhalwe ngeelwimi zesiNtu. Ukongeza, i-AfricArXiv kunye Masakhane yakha a Uphando lweelwimi ezininzi oluhambelanayo lophando lwaseAfrika ukusuka kwiinguqulelo zemibhalo-ngqangi yophando engeniswe kwi-AfricArXiv. Ezi nzame zixhasa Imigaqo-siseko yaseAfrika yokufikelela ngokuvulekileyo kunxibelelwano lwezemfundo malunga neyantlukwano yolwimi ethi iziphumo zophando lwaseAfrika kufuneka zenziwe zifumaneke ngomgaqo-siseko wolwimi oluqhelekileyo kuluntu lwenzululwazi yehlabathi ngokunjalo nangolwimi olunye okanye ezingaphezulu zasekuhlaleni zesiNtu.
iindidi:	Ukwahluka kweeLwimiUkuFikelela
tags: Ukufunyanwa kophando lwaseAfrikaezininzi ngeelwimi